Warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska AMISOM Somalia ayaa lagu sheegay in ciidankoodu dileen lix taliye katirsan ururka Shabaab ee ka dagaallamay dalka Somalia, waxaana qoraalkaasi lagu sheegay in xubnahaasi lagu dilay waqtiyo kala duwan iyo goobo kala gadisan.
Mid ka mid ah horjooegeyaashaas oo lagu magacaabay Abdirashid Bugdube, ayaa AMISOM tilmaamtay, in lagu dilay degmada Janaale gobolka Shabeellada Hoose, labadii bishan April.
Qoraalka ayaa lagu tilmaamay in hor-joogayaasha kale ee la dilay kala yihiin Aden Bale, oo ahaa taliyihii Al-Shabaab ee Leego, Sheekh Maxamed Cali, oo ahaa taliye ku xigeenkii Al-Shabaab ee Janaale, Maxamed Abribao oo ahaa xaakimkii Al-Shabaab ee Janaale iyo Xasan Cali Dhoore oo madax ka ahaa amniyadka Shabeellada Hoose.
War-saxaafadeedka ayaa AMISOM sidoo kale ku muujiysay inay dileen laba nin oo ajnabi ah, kuwaasi oo kala ah, Abu Islam oo ahaa khabiir dhinaca walxaha qarxa ah una dashay dalka Yemen, iyo Sheekh Mansuur oo ahaa Kenyan madax ka ahaa tababarada Al-Shabaab.
Qoraalkan ilaa hadda kama hadlin ururka Al-Shabaab, waxaana lagu soo beegan xilli deegaanka Jannaale ku laabtay gacanta dowladda islamarkaan gobolka Shabeellaha hoose kasocdaan dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo lagu doonayo in dib loogu qabsado deegaano ku suganyihiin xarakadaasi.
MUQDISHU- Dowladda Federalka Somalia ayaa waddanka Morocco u dirtay codsi ku aadan in laga caawiyo arrimaha la dagallanka argagixisada iyo dhismaha hay'adaha amniga dalka Somalia kadib shir dhexmaray Ra'isal wasaare Cumar Cabdirashiid iyo wasiirka Arrimaha Dibadda w ...
​Qaraxyo khasaaro geestay oo ka dhacay Leego
Soomaliya 15.01.2017. 12:50
​5 katirsan ciidanka AMISOM oo Muqdishu lagu xiray
Soomaliya 05.06.2016. 16:46
​Kenya oo dishay 21 Al-shabaab katirsan
Soomaliya 20.03.2016. 15:08
​Sarkaal katirsan Shabaab oo lagu qabtay dagaalkii Bariire
Soomaliya 16.05.2016. 22:52